Ametican Ultraviolet - Omyanmar
> Electronics>Ametican Ultraviolet
Model no. Gennie 2
Gennie2: UVGI Air Purifier
* Color LCD Touch Control Panel with Remote Cortroller*
* Terperature & % RH Display*
* 220Vac/ 50Hz
* Ozone output : 500mg / h
* 8 Purification Technologies
* HEPA - Active Carbon Net - Cold Catalyst Net - Active Carbon Net
Aluminium Based Photocatalyst Net - UVC - Negative Ion - Ozone (Optional)
* Efficient area - 750 sqft
* Weight 8 kg
သင့်အိမ်နှင့် ရုံးခန်းအတွင်း လေကောင်းလေသန့်အတွက် အဖေါ်မွန်
YOUR INDOOR AIR QUALITY SOLUTIONS PARTNER
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိန်းရေး အေဂျင်စီမှ ဖော်ပြချက်
မိတ်ဆွေသင်နေ့စဉ် ရှုရှိုက်နေရသော Indoor Air (အခန်းတွင်းလေ) Outdoor Air (ပြင်ပလေ) ထက် အဆများစွာပို၍ ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်ကို သင်သိပါသလား?
၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ဖျားနာမှု၊ အအေးမိခြင်းသည် Indoor Air (အခန်းတွင်းလေ) ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သင်သိပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ် အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ပျှမ်းမျှအားဖြင့် လိုအပ်ချက်
အစာ 1 kg တစ်နေ့တာ စားသုံးခြင်း
ရေ2kg တစ်နေ့တာ သောက်သုံးခြင်း
လေ 15 kg တစ်နေ့တာ ရှုရှိုက်ခြင်း
(ဥပမားပန်းခြံ၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေ ၊ သစ်ပင်သစ်တောများသော နေရာစသည်ဖြင့် သွားရောက်ကြသည်။)
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Mother Nature ဟုခေါ်သော သဘာဝတရားမှပေးသည့် လက်ဆောင်ကောင်များကြောင့် ဖြစ်သည်။
* နေရောင်ခြည်ကြောင့် လေထဲရှိ ပိုမွှားများကို သေစေနိုင်ခြင်း။
* မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် လေထဲရှိ ဖုန်မှုန့်များ ၊ အညစ်ကြေးများ လျှော်ဖွပ်လိုက်သကဲ့သို့ ပြောင်းစင်စေခြင်း။
* လေတိုက်မှုကြောင့် မကောင်သောအနံ့အသက်များကို ပယ်ပျောက်စေနိုင်ခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပေသည်။
ဤ Mother Nature က ပေးစွမ်းနိုင်သော သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သည့် လေရရှိရန် နေ၊ ရေ၊ လေတို့ကို သင့်အိမ်ခန်းနှင့် အလုပ်ရုံအတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်၍ ရနိုင်ပါသလား?
သို့သော် Mother Nature နှင့် အလားတူသော ခေတ်မှီနည်းပညာဇြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် လေသန့်စင် (Air Purifier) ကို သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် သင်၏ Indoor Air (အခန်းတွင်းလေ) သည် ပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့် ပန်းခြံအတွင်းမှ လေအလား သန့်ရှင်းလန်းဆန်းသော လေကိုသင် ရှုရှိုက်နိုင်ပေသည်။
Green Dynamics Co., Ltd မှ မိတ်ဆက်ပေးမည့် လေသန့်စက် (Air Purifier) များ၏ ပါဝင်သော Function များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ
* လူ၏ခန္ဓာကိုယ် ကြွက်သားများအား သက်တောင့်သက်သာရှိအောင် ကူညီပေးခြင်းကြောင့် ကျီးပေါင်းတက်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းမှ သက်သာကင်းဝေး စေနိုင်သည်။
* စိတ်တည်ငြိမ်မှုကောင်းအောင် ကူညီပေးသည်။
* သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းခြင်းကြောင့် ခြေလက်အေးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
* ကိုယ်ခံအား (Immue System) ကောင်းအောင် ကူညီပေးသည်။
* ခေါင်းကိုက်ခြင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း နှင့် ဖျားနာခြင်းတို့မှ အမြန်ပြန်လည် ကောင်းမွန်အောင် ကူညီပေးသည်။
* ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်နိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်းကြောင့် အားအင်ပြည့်ဖြိုး လန်းဆန်းတက်ကြွသော တစ်နေ့တာကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။
* အဆုတ် နှင့် နှလုံး လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကောင်းမွန်အောင် ကူညီပေးသည်။
* မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သော ဆံပင်ရှည်များ တိရိစ္ဆာန်များ၏အမွးအမျင်များ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ဝတ်မှုန် (Poilen) များကို Trap လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။
* အိမ်သန့်ရှင်းပြုလုပ်ရာတွင် အချိန်တိုသက်သာအောင် အထောက်အကူပေးခြင်း။
* Pre Filter မှ ကျွံထွက်လာသော မျက်လုံးနှင့်ကြည့်၍ပင် မမြင်နိုင်သော 0.3 Micron အရွယ်အစားအထိ သေးငယ်ပြီး လေထဲတွင် ပျံ့နှံ့နေနိုင်သော မှို (Mold), ဝတ်မှုံ (Pollen), ဗိုင်းရပ်စ် (Virus), ဘက်တီးရီးယား (Bacteria), Dustmites များကို 99.97% အထိ ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
* ၎င်းပိုးမွှားများကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ဓာတ်မတည့်မှု (Allergies) နှင့် ပန်းနာရင်ကျပ် (Asthma) ရောဂါများကို လျော့နည်းသက်သာ စေပါသည်။
* မီးသွေးမှ အခြေခံထုတ်လုပ်ထားသော Filter ဖြစ်သည်။
* လေထံ၌ ပျံ့နှံ့သော မကောင်းသည့် အနံ့အသက်များဖြစ်သည့် ဆေးလိပ်ငွေ့အနံ့ (Smoke), မှို (Mold), ဗိုင်းရပ်စ် (Virus), ဘက်တီးရီးယား (Bacteria) တို့မှ အညစ်ကြေးများစွန့်၍ ထွက်လာသော အနံ့၊ ကားများမှထွက်လာသော ဓာတ်ငွေ့အနံ့၊ အစားအသောက် အကြော်အလှော်အနံ့၊ တိရိစ္ဆာန်များမှ ထွက်သော မကောင်းသည့် အနံ့အသက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင် ပါသည်။
PCO (Photocatalyst Oxide)
* ကမ္ဘာနောက်ဆုံးပေါ် Green Technology ဖြစ်ပြီး လူကိုအန္တရယ်မပေးသော ပိုးသတ်သောနည်းပညာ ဖြစ်ပါသည်။
* UV Light အလင်းအားဖြင့်ဓာတ်ပြုပြီး ဗိုင်းရပ်(စ်)၊ ဘက်တီးရီးယား နှင့် အခြားလေကို ညစ်ညမ်းစေသောအရာများကို ဖျက်စီးဖြိုခွဲပေးသည်။
UVC (Ultraviolet C-Band)
* လေထံ၌ ပျံ့နှံ့ကာ လူကိုအန္တရယ်ပေးနိုင်သည့် Virus & Bacteria များသည် HEPA Fiter မှ ကျွံထွက်လာပါက UVC မှ DNA ကို ဖျက်ဆီးလိုက်သောနည်းဖြင့် ချေမှုန်းပေးသည်။
* တုပ်ကွေး၊ ဖျားနာ၊ ဝက်သက်၊ ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးအောင် ကူညီပေးနိုင်ခြင်း။
* ကျန်းမာသောကြောင့် ဆေးကုသစရိတ် သက်သာစေနိုင် ပါသည်။
*Company များလည်း ဝန်ထမ်းများ ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော လုပ်ငန်းခွင်ကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပိုမိုတိုးတက် အောင်မြင်နိုင် ပါသည်။
* သန့်ရှင်း၍ ပိုးမွှားကင်းစင်သော လေကြောင့် စိတ်ကြည်လင် လန်းဆန်းစေနိုင် ပါသည်။
* စိမ်းရွှင်ရွှင်အနံ့ရှိပြီး ဓါတ်ပြုစွမ်းအား ကြီးမားသည်။
* စီးကရက်မီးခိုးနှံ့၊ အစားအသောက်အနံ့၊ ပရိဘောဂအနံ့၊ မှို နှင့် ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော အနံ့ဆိုးများကို အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းအောင် ချေဖျက်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိသည်။
* အသည်းရောင်ရောဂါ၊ တုပ်ကွေး၊ ဆာရ် အစရှိသော ဗိုင်းရပ်စ်များကို သုတ်သင်ပေးပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်းမှ ကူးစက်တက်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
* အိုဇုန်းဖွင့်ထားချိန်တွင် လူများအခန်းတွင်းမှ ထွက်ပြီး အိုဇုန်းပိတ်ပြီး နာရီဝက်အကြာမှ အခန်းအတွင်းသို့ ဝင်သင့်ပါသည်။
Multi Cooker CMC-E1600A
AirCare Pro 2-in-1 PM2.5 Air Purifier PLUS Humidifier (Up...